‘प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, जीवन हिजोको जस्तो रहिरहन्न, परिवर्तन हुन्छ’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
‘प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, जीवन हिजोको जस्तो रहिरहन्न, परिवर्तन हुन्छ’
प्रकाशित मिति : असार २२, २०७४ बिहीबार
लेखक राजन थपलिया आफूलाई राम्रो पाठक भन्न रुचाउँछन् । १० कक्षामा पढ्ने बेलामा नै ३ हजार किताब पढेको भनेर उनको चर्चा भएको थियो । उनले ‘थिंकिङ अबाउट इट’, ‘सिम्पल रुल्स र ‘टनिङ प्वाइन्स’ भन्ने किताब लेखेका छन् । उनको मेडिकल साइन्समा आधारित ‘स्विट स्पिसेस’ ‘रिजोइस’को दुईटा सिरिज आइसकेको छ ।
त्यसको जम्मा दशवटा सिरिज निकाल्ने उनको सोच छ । उनले दर्शनसम्बन्धि, व्यक्तित्व विकाससम्बन्धि पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनका पुस्तक पढ्दा पोजेटिभ भाइब्रेसन प्राप्त गर्न सकिन्छ । भर्खरै सकारात्मक सोच र प्रेरणा दिने खालको पुस्तक ‘हन्डेर्ड प्रसेन्ट लाइफ’ सार्वजनीक गरेका थपलियाँसँग पुस्तककै सेरोफेरोमा रहेर नेपालयका विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेको कुराकानी खसोखासका पाठकका लागि ।
यो तपाईंको कतिऔं पुस्तक हो ?
यो मेरो एघारौं पुस्तक हो ।
यो कस्तो पुस्तक हो ?
यो जीवन रुपान्तरण गर्ने पुस्तक हो । यो दर्शनमा आधारित छ । मानिसहरुलाई प्रेरणा दिने खालको पुस्तक हो । हामीले केहि गर्ने बाचा ग¥यौं भने जीवन हिजोको जस्तो हुँदैन । परिवर्तन हुँन्छ । यो पुस्तकमा एउटा च्याप्टर नै छ, ‘गुडबाइ डिप्रेसन’ भन्ने । हामी अस्पतालको छेउमै बस्छौं । व्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने म अस्पतालमै काम गर्ने मान्छे । मान्छे मरिरहेका छन्, एम्बुलेन्समा लगेका छन् त्यो हामीले देखेका छौं । जस्तो पशुपतिमा हामी जाँदा मरेको मान्छे देख्दा केहि अनुभव हुन्छ । एकदमै बिग्रेको मान्छेलाई पनि त्यहाँ लगेर मान्छे जलाएको देखायो भने उसमा धेरै परिवर्तन आउँछ । भारतका जेलमा कतिपय मान्छेलाई आस्था च्यानल देखाउँछन रे । त्यो किन त भन्दा केहि परिवर्तन होस् भनेर ।
यो पुस्तक लेख्नुको कारण के हो ?
म आफूलाई लेखकभन्दा पनि एउटा राम्रो पाठक हुँ भन्दा सहज अनुभव गर्छु । धेरै पुस्तक पढ्दापढ्दा अरुको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको जस्तो लाग्यो । यो पढे पनि राम्रो लाग्छ, त्यो पढे पनि राम्रो लाग्छ । अरुको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको राम्रो होइन । त्यसलाई कम गरेर आफ्नै सिद्धान्त दिउँ कि भनेर जे गरेपनि शत् प्रतिशत दिउँ भन्ने सोच आयो ।
पुस्तको नाम ‘हन्डेर्ड प्रसेन्ट लाइफ’ किन राख्नुभयो ?
बिहान सूर्य उदाउँछ नि ‘हन्डेर्ड प्रसेन्ट लाइफ’ भनेको त्यहि हो क्या । विज्ञानमा त शत प्रतिशत हुँदैन । शत प्रतिशत भनेको त्यो चिजमा तुलना गर्ने हो, जस्तो मान्छेको कुनै गन्तव्य छ त्यो चिजलाई पूरा गर्नुभनेको शत प्रतिशत हो । जस्तो तपाईंलाई कुनै विशयमा मास्टर्स डिग्री लिने सपना छ र त्यो पूरा गर्नु भयो भने त्यो शत प्रतिशत हो ।
उपन्यास लेख्ने मान्छे यस्तो पुस्तक निकाल्ने सोच कसरी आयो ?
मैले यस्तै खाले पुस्तक पहिला पनि निकालेको थिएँ । मैले ‘सिम्पल रुल्स अफ लाइफ’ भन्ने पुस्तक निकालेको थिएँ । यस्तै खाले ‘जिरो टु हिरो’ र ‘डन्ट फलो योर ड्रिम’ भन्ने पुस्तक पनि आउँदैछ । अरु पुस्तक पनि लेख्दै छु । यो के भने आफू पनि सिक्ने र सुधार हुँदै जाने र अरु इच्छा हुनेहरुमा पनि सुधार आओस् भन्ने हिसाबले यस्तो पुस्तकमा मलाई रुचि लागेको हो । अनि अर्को कुरा यस्ता खाले पुस्तकको माग पनि अमेरिकामा धेरै छ । मान्छेहरु सकारात्मक सोचको विकास गर्न चाहन्छन् । युवाहरुको पनि त्यत्तिकै चाहना छ । र, अर्को कुरा आफैंलाई सुधार्न पनि लेखेको हुँ ।
पुस्तकको मुख्य सन्देश के हो ?
यसको ‘मेन थिम’ भनेको ‘प्रमिस’ हो । कुनै पनि कुरामा मान्छेले एकचित्त भएर लागेको छ भने उ असफल हुँदैन । सोच विचार भनेको त्यति बलियो हुन्छ । एउटा सोचले आगो बाल्दिन्छ । एउटै चिजले जिन्दगी खत्तम बनाइदिन्छ । कहाँबाट कहाँ पुग्छन् मान्छेहरु त्यो सबै सोचकै कारणले हो ।
पुस्तकबारे प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
पुस्तक निकालेको एक महिना हुन लाग्यो । सोचेभन्दा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । कयानडा, अमेरिका, बेलायती मिडियाबाट प्रतिक्रिया आयो । नेपाली मिडियाबाट पनि त्यत्तिकै राम्रो प्रतिक्रिया आयो । भारतीय मिडियाबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया आयो । यो चाहिँ मलाई अचम्मलाग्दो सुखद प्रतिक्रिया पाएँ ।
तपाईंको यो पुस्तक कस्ता खाले.पाठकले पढ्ने हो ?
दुई खाले मान्छेले यो पुस्तक पढ्ने हो । एउटा भनेको एकदम सफल भएका मान्छेले । अर्को भनेको जीवनमा अन्यन्तै हार खाएको, डोरीमा झुन्डिनुप¥यो भन्ने सोच आएका मान्छेले पढ्ने हो । जिन्दगीमा कुनै विकल्प नदेख्नेहरुले पढ्ने खालको पुस्तक हो । पुस्तकमा मैले आफ्नै उदाहरण पनि दिएको छु । हिरो हुनुपर्ने मान्छे जिरो भएर बसिरहेको हुन्छन् । निराश भएर के हुन्छ ? विगतमा त फर्कन मिल्दैन । एउटा भनाइअनुसार मान्छे यस्तो बुद्धिमान प्राणी हो कि आफूलाई पूरै बेबकुफ बनाउन सक्छ रे । अर्को अध्याय छ, आत्मशान्ति कसरी गर्ने भन्ने बारे । अर्को अध्याय ‘सुप्रिम पर्सनालिटी’ भन्ने छ । धेरै सफल मान्छेले सुप्रिम पर्सनालिटीको बारे थाहा पाउनु प¥यो । गौतम बुद्ध, राम, कुष्ण, मुहाम्मद, जेसस क्राइष्ट आदि सुप्रिम पर्सनालिटी हुन् ।
यस्तो भावना कसरी आयो तपाईंमा ?
यो त बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै आयो । ट्रेनमा हुने बेलामा आएको हो । हामी जस्तो तेस्रो विश्वबाट आएका मान्छेहरुले यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको नयाँनयाँ फरक सोच राखेर हो । विसौं वर्ष लगाएर अमेरिकी इतिहास, दर्शन पढेपनि केहि पनि हुँदैन । त्यसरी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसको साटो मान्छेलाई काम लाग्ने फरक खालका कुरा भयो भने भोलि नै भाइरल हुन बेर लाग्दैन । विचार सोच भनेको धेरै गहन कुरा हो । मान्छेको जीवनको निर्णय भनेको ट्रेनको दिशा जस्तै जस्तै हो । एउटा सानो प्वाइन्टले कहाँबाट कहाँ पुग्छ । जीवनको निर्णय भनेको पनि त्यस्तै हो ।
अन्य पुस्तक पनि लेख्दैछु भन्नुभयो, कस्तो खालका पुस्तक हुन ति ?
मैले दुईवटा पुस्तक प्रकाशित गर्दै छु । एउटा पुस्तक नेपालको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारे छ अर्को पुस्तक चाहिँ ‘डन्ट फलो योर ड्रिम’ भन्ने पुस्तक छ । सबै मान्छेहरु सपनालाई पछ्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर म सपनालाई नपछ्याउँ भन्छु । टु द प्वाइन्ट जानुप¥यो भन्ने हो ।
कहिले प्रकाशन हुँदैछ त्यो पुस्तक ?
सेप्टेम्बरमा प्रकाशन हुँदैछ ।
पुस्तक भनेको त व्यक्तिगत विचार नै हो । कसैको व्यक्तिगत विचारलाई, कुनै सिद्धान्तलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन । तर, सोच विचार गरेको राम्रो हो । मान्छेले बाचा गरेर अगाडि बढ्नुप¥यो । मान्छेहरुले भन्छन् नि यो गरेको पनि भएन त्यो गरेको पनि भएन । त्यो भनेर भएन ‘प्रमिस’ गरेर अगाडि बढ्नु प¥यो । नराम्रो कुरालाई चटक्र्क छोड्न सक्नुप¥यो । राम्रो कुरालाई अझै कसरी राम्रो बनाउने भनेर लाग्नुप¥यो ।